Xiaomi Mi Mix, i-6.4-intshi ye-smartphone ngaphandle kwesakhelo | Iindaba zeGajethi
Xiaomi Mi Mix, i-6.4-intshi ye-smartphone ngaphandle kwesakhelo
UXiaomi uye wazisa ngokusesikweni ifayile ye- kulindelwe Mi Inqaku 2 engashiyanga phantse nabani na ongakhathaliyo, kunye nezibuko zayo ezintsha zenyani ezibhaptiziweyo njenge-My VR. Ukongeza, ikwanalo nexesha kumnyhadala omde wokusibonisa umnxeba oqinisekileyo osibonisa apho umenzi waseTshayina afuna ukwalathisa ikamva lakhe kwintengiso yefowuni ephathekayo.
Njengoko yayiyinto edumileyo "Enye into engaphezulu" amaxesha amaninzi asetyenziswa yiApple, UXiaomi usibonisile iXiaomi Mi Mix, isixhobo esiphathwayo esinomboniso omangalisayo we-6.4-intshi kwaye engenaso kwaphela isakhelo njengoko ubona kwividiyo eyintloko yeli nqaku.
Ngaphandle kwento yokuba okwangoku yiprojekthi enento entle kakhulu, edibene nayo noPhilippe Starck ukufezekisa uyilo olunodidi olukhulu, uXiaomi uqinisekisile ukuba injongo yakhe kukusungula kwimarike kwaye ithengise kwigosa kungekudala.
1 Isikrini sihlala kwi-91.3% ngaphambili
2 Uyilo alunikezeli kumandla okanye kwintsebenzo
3 Ixabiso kunye nokufumaneka komxube weXiaomi Mi
Isikrini sihlala kwi-91.3% ngaphambili
Ngaphandle kwamathandabuzo ukuba lo Xiaomi Mi Mix utsala umdla wento kungenxa yokuba isikrini sayo, esingathathi nto ngaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi kwe-91.3% ngaphambili kwaye ngakumbi kuyilo lwayo.
Ukufezekisa oku, umenzi waseTshayina kuye kwafuneka asebenze kakhulu kwaye kukuba ngaphambili kwaso nasiphi na isiphelo sendlela izinto ezininzi zigcinwa kwesi sixhobo siza kunyamalala. Umzekelo, isivamvo sokusondela ngoku sifihliwe emva kwescreen kwaye sisebenza nge-ultrasound kwaye ikhamera yangaphambili iye yancinci kakhulu, inciphisa ubungakanani bayo ukuya kuthi ga kwi-50%.
Ukongeza sifumana inkqubo ebhaptiziweyo njenge "Itekhnoloji ye-cantilever piezoelectric ceramic acoustic" etshintsha isithethi sendabuko, ekubonakala ukuba iya kusinika umgangatho wesandi ongcono.
Uyilo alunikezeli kumandla okanye kwintsebenzo
Uninzi lwethu lunokucinga ukuba ukufumana indawo engaphambili apho iscreen kuyeyona nto iphambili kunokubeka esichengeni amandla okanye ukusebenza kwaso nasiphi na isiphelo sendlela, kodwa lo Xiaomi Mi Mix uya kuba yiyo nantoni na ngaphandle kwaso nasiphi na isixhobo. Kwaye ingaphakathi ngaphakathi iya kuthi inyuse i- Snapdragon 821, efanayo naleyo siyifumana kwiXiaomi Mi5S okanye kwiMi Qaphela 2.
Ngokuphathelele kwi-RAM, iya kuxhotyiswa nge-6GB nge-256GB yokugcina ngaphakathi. Ukugqiba ngenkcazo, njengoko kubhengeziwe kumsitho kuya kubakho Ikhamera ephambili ye-megapixel eyi-16 kunye nekhamera engaphambili ye-5 megapixel. Ibhetri iya kuba yi-4.400 mAh kwaye ngokuqinisekileyo iya kubonisa iTekhnoloji ekhawulezayo yokutshaja i-3.0.
Ixabiso kunye nokufumaneka komxube weXiaomi Mi
Ukuba ubuzibuza kulo lonke inqaku ukuba ngaba le smartphone iza kubetha emarikeni ngendlela esemthethweni, impendulo kaXiaomi ngu-ewe ovakalayo, nangona okwangoku kungekho mhla wasemthethweni. Ewe amahemuhemu sele ecebisa ukuba ingaqala ukubakho ngenyanga ka-Novemba, okanye yintoni efanayo phantse ngaxeshanye neXiaomi Mi Qaphela 2.
Ixabiso lalo libekwe kwi-3.499 yuan yemodeli esezantsi eya kuba ne-4GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina. Ngokwenxalenye yayo, imodeli ephezulu, kunye naleya sonke esifuna ukuba nayo ezandleni zethu, kunye ne-6GB ye-RAM kunye ne-256GB yogcino lwangaphakathi iya kufikelela kwintengiso nge Ixabiso le-3.999 yuan okanye yintoni efanayo malunga nama-euro angama-550 ukutshintsha.
Okwangoku kuya kufuneka silinde umhla osemthethweni wokuphehlelelwa kwesixhobo ukuze siqinisekiswe kwaye ngaphezulu kwako konke, kwaye ndivumele ukuba ndingakholwayo, ukuba intsomi esiyibonileyo namhlanje ifana nenyani. Ukuba kunjalo, siza kujongana neyona nto inokuba yeyona ndawo intle kwimarike ngenxa yesikrini sayo esingenachaphaza esiya kusivumela ukuba sonwabe ngendlela eyahlukileyo yeefoto okanye nayiphi na ividiyo. Sonke siphuphe nge-smartphone enesikrini kuphela kwaye kubonakala ngathi uXiaomi usondele kakhulu ekufezekiseni.
Ngaba ucinga ukuba iXiaomi Mi Mix izakufika kwintengiso ngokusemthethweni efana nale siyibonileyo namhlanje kumsitho weXiaomi?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Xiaomi Mi Mix, i-6.4-intshi ye-smartphone ngaphandle kwesakhelo
I-Opera ngoku ikuvumela ukuba ukhangele kwi-86% ngokukhawuleza
IBlackBerry DTEK60 ngoku iyathengiswa